Maareeyaha Dekeda Muqdisho Cabdulaahi Cali Nuur oo loo diidey inuu shaqadiisa guto, Madaxweyne Shariif oo arintaasi ka danbeeya, Beesha Wacaysle oo baaq u dirtay Madaxweyne Shariif!! Boob ka socda Dekedda Muqdisho.. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Maareeyaha Dekeda Muqdisho Cabdulaahi Cali Nuur oo loo diidey inuu shaqadiisa guto, Madaxweyne Shariif oo arintaasi ka danbeeya, Beesha Wacaysle oo baaq u dirtay Madaxweyne Shariif!! Boob ka socda Dekedda Muqdisho.. Kulan weyn oo Muqdisho ay isugu yimaadeen xildhibaano, warxagarad , haween , iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Waceysle kana dhacay hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ayey Beesha Waceysle madaxweyne Shariif ugu baaqday inuu si shuruud laaan u hawlgeliyo Maareeyaha Dekeda Muqdisho ee uu dhowaan magacaabeen Raisul wasaare Cabdiweli Gaas iyo Wasiirkaa gaadiidka cirka iyo dhulka.
Kulankan ayaa sidoo kale lagu taagarayey magacaabida maareyaha cusub ee xilkaas loo dhiibay oo ah nin aqoonayhan ah oo mudo kasoo shaqeynayey garoonka diyaaradaha Muqdisho laguna magacaabo Cabdulaahi Cali Nuur.
Xildhibaan Dahir Gelle oo ka mid ahaa madaxdi ka qeybgashay munaasabada ayaa sheegay in sida dawladnimada lagu yaqaabo ay tahay inuu sharciga shaqeeyo oo laga gudbo nin jecleysiga iyo qabyaalada , waxaana uu ku baaqay in la qadariyo wareegtooyinka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Shido oo ah nabadoonka beesha Waceysle ugu qeybgalaya xulida xildhibaanada ayaa dhinaciisa sheegay inay dareensan yahiin in madaxweynaha uusan la dhacsaneyn magacaabida maareyaha cusub , balse waxuu qeexay inay muhiim tahay in la is qadariyo oo aan lagu tarax tagin nin jaceylka iyo qabyaalada ,waxaana uu goobta ka cadeeyey in sanooyinki u dambeeyey beesha Waceysle loogu gardaroonayey kuraasta siyaasada, iyadoo uu sheegay in madaxweyne Shariif uu duudsiiyey beesha Waceysle xuquuqdii ay ku lahayd maamulka Dalka.
Xubanaha shirkaan ka qeybgalay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ay kamid ahaayeen Dahir Gelle , Cabdulaahi Geedi Shadoor , Garabey, Jeebo iyo Afrax , dhinaca siyaasiyiintana waxaa kamid ahaa Ismaacil Macalin Muse , Cabdulaahi Cali Gadafey, sidoo kalana dhinaca culimada waxaa kamid ahaa Shiikh Cumar Cali Rooble iyo Shiikh Muse Cagaweyne halka ganacsato badan oo magac ku dhax leh beesha ay joogeen, sidoo kale waxaa shirka ka qeyb galay haween kasoo jeeda Beesha Waceysle.
Kulankan ayaa ahaa mid u muuqday kii ugu weynaa oo xubnaha Beesha Waceysle ay ka qeybgalaan sanadihi ugu dmabeeyay, waxaana muuqatay in hal fikir ay ka qabaan arinka magacaabida maareyaha iyo saamiga siyaasadeed ee xiliga isbadelka.
Dhawaan ayuu Raisul wasaare Cabdiweli Gaas u magacaabay Maareeyaha dekeda Muqdisho inuu noqdo Cabdulaahi Cali Nur oo ka soo jeeda beesha Wacesle , hase yeeshee waxaaa arinkaas ka horyimid madaxeyne Shariif oo isna dhankiisa amray Maareeyihii hore Sayid Cali inuu shaqada sii wato, Sayid Cali iyo Shariifka ayaa la sheegayaa inay kasoo wada jeedaan beesha Rati Abgaal.
Dhinaca kale waxaa shirkii beesha Waceysle laga soo saaray guddi ka kooban ilaa 11 xubnood oo isugu jira xildhibaano iyo ganacsato, gudigaas oo la kulmi doona madaxweynaha iyo Raisul wasaaraha Soomaaliya si ay usii amba qaadaan qorshaha dhaqangalinta magacaabista maareeyaha cusub ee dekedda Muqdisho Mudane Cabdullaahi cali Nuur oo si aan sharci ahayn looga hor istaagay shaqadiisa. Si kastaba aha ahaatee madaxweyne Shariif ayaa la sheegayaa inuu lasoo baxay qabyaalad aad u hooseysa oo sida la sheegay uu ku naas nuujinayo Beeshiisa, sidoo kale Madaxweyne Shariif ayaa la sheegayaa inuu doonayo in uu lacag badan ka aruursado dekedda Muqdosho lacagtaas oo uu doonayo inuu ku badsado lacagaha uu u qorsheeyay inuu ku gato madaxtinimada Soomaaliya.